Amygws စျေး - အွန်လိုင်း AMY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Amygws (AMY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Amygws (AMY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Amygws ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Amygws တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Amygws များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AmygwsAMY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000423AmygwsAMY သို့ ယူရိုEUR€0.000358AmygwsAMY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000323AmygwsAMY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000386AmygwsAMY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00384AmygwsAMY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00267AmygwsAMY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00935AmygwsAMY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00157AmygwsAMY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000562AmygwsAMY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000588AmygwsAMY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00954AmygwsAMY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00328AmygwsAMY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00224AmygwsAMY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0317AmygwsAMY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0709AmygwsAMY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00058AmygwsAMY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000637AmygwsAMY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0131AmygwsAMY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00294AmygwsAMY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0447AmygwsAMY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.503AmygwsAMY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.163AmygwsAMY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.031AmygwsAMY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0117
AmygwsAMY သို့ BitcoinBTC0.00000004 AmygwsAMY သို့ EthereumETH0.000001 AmygwsAMY သို့ LitecoinLTC0.000007 AmygwsAMY သို့ DigitalCashDASH0.000005 AmygwsAMY သို့ MoneroXMR0.000005 AmygwsAMY သို့ NxtNXT0.035 AmygwsAMY သို့ Ethereum ClassicETC0.00006 AmygwsAMY သို့ DogecoinDOGE0.119 AmygwsAMY သို့ ZCashZEC0.000005 AmygwsAMY သို့ BitsharesBTS0.0163 AmygwsAMY သို့ DigiByteDGB0.016 AmygwsAMY သို့ RippleXRP0.00142 AmygwsAMY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 AmygwsAMY သို့ PeerCoinPPC0.00147 AmygwsAMY သို့ CraigsCoinCRAIG0.197 AmygwsAMY သို့ BitstakeXBS0.0185 AmygwsAMY သို့ PayCoinXPY0.00756 AmygwsAMY သို့ ProsperCoinPRC0.0543 AmygwsAMY သို့ YbCoinYBC0.0000002 AmygwsAMY သို့ DarkKushDANK0.139 AmygwsAMY သို့ GiveCoinGIVE0.937 AmygwsAMY သို့ KoboCoinKOBO0.0956 AmygwsAMY သို့ DarkTokenDT0.00039 AmygwsAMY သို့ CETUS CoinCETI1.25